Arch Linux 2019-10-01, yekutanga Arch vhezheni yekushandisa Linux 5.3 | Linux Vakapindwa muropa
Sezvo vazhinji venyu vamunoziva, Arch Linux inoshandisa iyo yekuvandudza system inozivikanwa seRolling Release. Izvi zvinoreva kuti mushure mekutanga kuisirwa, isu tichagamuchira zvigadziriso zvehupenyu. Asi izvi hazvireve kuti havasunungure shanduro nyowani dzehurongwa hwavo hwekushandisa, kunyangwe izvo zvavanonyatsoburitsa mifananidzo mitsva yeIO umo vakaisa nhau dzese, senge ArchLinux 2019-10-01, iyo Gumiguru mufananidzo wakaburitswa zuro.
Iyo inozivikanwa inonyanya kuzivikanwa inosanganisirwa mune yazvino Arch Linux ISO ndiyo kernel yayo. Ndezve Linux 5.3, yazvino vhezheni yeLinux kernel iyo yakaburitswa pakati pemwedzi wapfuura. Pakati pezvinhu zvitsva zvinosanganisirwa muLinux 5.3 isu tine rutsigiro rweIntel Speed ​​Sarudza, rutsigiro rwe AMD Radeon Navi GPUs mune mutyairi we AMDGPU kana rutsigiro rweZhaoxin x86 CPUs.
Arch Linux 2019-10-01 iri kuuya senge yekuvandudza kune varipo vashandisi
Kuti uve wakanyanya kujekesa neiyo kernel uye kutendeka kuchokwadi, iyo vhezheni inosanganisira Arch Linux 2019-10-01 ndeye Linux 5.3.1. Ichi ndicho chekutanga kugadzirisa kugadzirisa mune akateedzana uye iyo yatove inokurudzirwa kutorwa nevazhinji, chimwe chinhu Arch Linux chaitwa nekuchiisa mune yazvino ISO mufananidzo.
Ivo havana kupa tsananguro yakawanda pamusoro pechinosanganisira ichi chifananidzo che ISO. Muchokwadi ivo havasati vaburitsa chero chinhu mune yavo zviri pamutemo webhusaiti, asi iyi yekuvandudza inosanganisira zvese zvitsva izvo zvakaunzwa mukati memwedzi waGunyana. Vashandisi varipo vanogashira Arch Linux 2019-10-01 seyekuvandudza, kunyangwe muchokwadi ichingova iyo yakapesana: iyo ISO mifananidzo inovandudzwa nenhau dzese dzavari kuburitsa kune yekushandisa system.
Kana iwe uchifarira, unogona kukopa iyo Arch Linux 2019-10-01 ISO, iine 627mb uremu, kubvira Iyi link. Vashandisi varipo vanogona kugadzirisa yavo yekushandisa system nekuvhura terminal uye typing iwo iwo wekuraira pacman-Syu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Arch Linux 2019-10-01, yekutanga Arch vhezheni yekushandisa Linux 5.3
Zvakanaka, gadziridza yehupenyu. Iyi kernel ichachengetedza kuiswa mune ramangwana kweshanduro dzekupedzisira.